३ नम्बर प्रदेशको राजधानीबारे एमालेमा विवाद , भक्तपुर की काभ्रे ? – SamajKhabar.com
३ नम्बर प्रदेशको राजधानीबारे एमालेमा विवाद , भक्तपुर की काभ्रे ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०७४, सोमबार १०:५९
हेटौडा । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सचिवालयमा भक्तपुरलाई राजधानी बनाउन सोमबार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यद्वय शशिजंग थापा र हरिशरण लामिछानेले १० आधारसहित भक्तपुरलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि काभ्रे र नुवाकोटका प्रदेशसभा सदस्यले पनि आफ्नो जिल्लालाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कतिपय एमाले नेताहरु हेटौंडाकै निरन्तरताको पक्षमा छन् । प्रदेश राजधानी विवादले एमालेभित्र तनावको स्थिति बनाएको छ ।
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १०:५९ मा प्रकाशित